Qala blog Ubomi be-salum
Sinesitsha esitsha Blog, ngaphakathi IiNdaba.
Sifuna ukuvula le bhulogi ukuba wonke umntu athumele ngesiJamani ngokukhuselwa kwe-salmon yasendle. Iminikelo ingathunyelwa njengezithombe, ifilimu okanye nje njengombhalo. info@kasaan-media-publishers.eu
Siza kuphuhlisa icebo elifanayo kwiblogi yesiNgesi.
Siphinde siguqulele amanqaku ukusuka kwezinye iilwimi.
Kwihlabathi esiphila kulo, akukho mntu kufuneka akwesaba ukuguqula iingcamango zakhe ukushicilelanje ngokuba unamandla abameli, Izibopho okanye ukufumbathisa.
Inkunzi enkulu iyenze injongo yayo. Kukho abantu abangayithandi le fomu yamandla kwaye bayayichasa.
Ilifa lehlabathi libaluleke ngokukhawuleza kweYuro.
Ialmum kuphela IsiNgqamaniso ngenxa yezono zendalo esiya kuzo kwisizukulwana esilandelayo. Ukungathethi abantwana bethu abantwana.
Akunandaba amazwe ngamazwe isilwanyana sisifo salmon kunye nomthengi eYurophu jikelele ngendlela emisiweyo ityhefu.
Iintlanzi ezidliwayo ezinqwelweni azikwazi ukutya kwizibulala-zinambuzane, i-antibiotics kunye ne-fodder esincinci ekubunjweni kwayo kuvela kwizithako zemifuno. Ngaphandle kokuhlonela isilwanyana esilungele ukufa ngenxa yokutya kwethu.
Ukongeza, iintlanzi zisongelwa zizifo zengculazi, njengaye i-salmon i-anemia echaphazelekayo (igciwane lesandulela ngculaza eliphezulu kakhulu) ngokugcina uhlanga. Ngenxa yokuba i-salmon ye-aquaculture inetyhefu yokuba ingenakulungiswa, ikwabulala i-salmon yasendle kule ndawo. Kwakhona kubangela izifo ezininzi, ezifana nesifo sikashukela.
Hlala Ihlabathi eliphantsi kwamanzi eChile, eNorway nakwezinye iindawo, zibukeka njengeentlango ezinetyhefu.
Ukuba umthengi ubhikisha, i-EU iphakamisa ixabiso leepilisi. No.
Ukuba unemali enjengotshani, kufuneka ufumane iindlela zokuzalisa ezi ntlanzi ngokwemvelo kwaye kungekhona kwindawo engcolileyo neyobuhlungu.
Iinkampani ezinkulu kufuneka zibophezeleke ukuvuselela kwakhona umonakalo ongaphantsi kwamanzi ngeendleko zabo. Ngokukhawuleza, ngaphambi komonakalo omkhulu.
lizuze ezinye ezimbalwaabanomdla kuphela ngemali kodwa kungengobume, impilo okanye ukukhuselwa kweentlobo.
Nangona bagxininisa eli qiniso ngokuphindaphindiweyo. Akukho mntu ukholelwa ukuba iinkampani azikho.
Ngoku abathengi kufuneka benze okuthile.
Umzila we-salmon uholela e-Hamburg
Yithenge ngoku kuphela: EUR 8,49
Iphupha lomjikelezo wobomi 6. edition
I-Pan Fish ASA
Inqaku langaphambiliUMnuz Schwenker - ubomi bokupenda
Inqaku elilandelayoImfihlakalo emnyama ye-Alcatraz